Khaladkooda Maaha Ee Waa Adiga | Martech Zone
Monday, August 21, 2006 Talaado, Agoosto 22, 2006 Douglas Karr
Waxaan mar kale ku dhex arkay bartanka buugga mar labaad, aniga oo afar ku sita saxankayga hadda.
Waan soo qaatay Yar waa cusub weyn, waxaa qoray Seth Godin, usbuucaan. Horeyba waan ugu raaxeystey in kastoo Mudane Godin kadis igu qaadey. Haddii aan wax yar ka sii akhriyi lahaa buugga, waxaan ogaan lahaa in maaddadu ay tahay isku-darka shaqadiisa… Waxaan u malaynayaa inay aad u badan tahay sida dhageysiga 'Hits-kii ugu waaweynaa', oo weyn in la maqlo heesaha oo dhan… laakiin waxaan la yaabanahay sababta aad u sameyn weyday Kaliya dhageyso dhamaan cd-yada aad ku laheyd shelf.
Dhamaadka maalinta, waxaan hilmaamay wax badan oo aan ka akhriyay ama ka maqlay Mudane Godin. Waa wax aan dhammaanteen la xanuunsan nahay. Imisa buug ayaad xasuusataa? Nasiib wanaag, waxaan iibsadaa daboolyo adag maxaa yeelay waxaan inta badan soo qaataa buugaag duug ah oo aan ku dhex wareegaa si aan u helo dhiirigelin iyo fikrado. Kani waa mid ka mid ah buugaagtaas. Haddii aan si fudud u soo qaato buuggan oo aan akhriyo marinka aan ka hadlayo, waxay u qalantaa 10 jeer intii aan bixiyay.
Mudane Godin waa qoraa cajiib ah oo karti badan - inta badan xaaladaha ugu qalafsan ku dhejinaya erayo fudud oo aad ku dhaqmi karto. Qorayaal kale oo badan ayaan ku dhiirrigelin sida uu isagu sameeyo. Waana hubaa in qoraayo badan oo kale aysan haysan waxyaabaha soo socda ee Mudane Godin sameeyo. Aqrintiisu kuma sheegeyso waxa aad sameyneyso inay khaldan yihiin ama sax yihiin, wuxuu si fudud u weydiiyaa su'aalaha wuxuuna sheegaa waxyaabaha kugu kalifaya inaad wajiho xaaladahaaga madax.
Bogga 15, Seth wuxuu leeyahay:
Haddii dhagaystayaasha aad bartilmaameedsanayaan aysan dhagaysanayn, khaladkooda ma lihi, ee adigaa iska leh.
Taasi uma muuqan karto wax weyn wow, laakiin runtii waa. Bayaanka waxaa loo rogi karaa dhowr meelood oo kala duwan:
Haddii macaamiishaadu aysan adeegsan karin softiweerka, iyaga khalad ma leh, ee adigaa iska leh.
Haddii rajadaadu aysan iibsan badeecada, iyaga khalad ma leh, ee adigaa iska leh.
Haddii aysan booqan degelkaaga, ma aha wax iyaga khaldan, ee adigaa iska leh.
Haddii shaqaalahaaga aysan dhagaysanayn, khaladkooda ma aha, adigaa iska leh.
Haddii maamulahaagu uusan dhegeysanayn, khaladkooda ma lihi, adiga ayaa iska leh.
Haddii dalabkaagu shaqeyn waayo, khaladkooda ma aha, ee adigaa iska leh.
Haddii xaaskaaga / saygaagu uusan dhegeysanayn, iyagu khaladkooda ma aha, adigaa iska leh.
Haddii carruurtaadu aysan dhegeysanayn, khaladkooda ma aha, ee adigaa iska leh.
Haddii aadan ku faraxsanayn, khaladkooda ma aha, ee adigaa iska leh.
Waxaan u maleynayaa in ujeedku yahay, maxay yihiin aad wax ka qabanayso? Seth wuxuu sii socdaa:
Haddii hal sheeko aysan shaqeynayn, beddel waxaad sameyneyso, ha u beddelin sida aad u qeylineyso (ama u cabaadi).
Beddel waxaad sameyneyso. Waxaad awood u leedahay inaad bedesho. Isbeddelku macnaheedu maahan inaad keligaa sameysid, in kastoo. Weydiiso caawimaad haddii aad u baahatid.
Maaha Dadaal Dadka Ka Yaabiya